Indoor masitepisi: sarudza maitiro ako | Bezzia
Indoor masitepisi: sarudza maitiro ako
Maria vazquez | 22/11/2021 20:00 | Kushongedza maitiro
Masitepisi emumba anotibatsira kubatanidza uriri hwemba. Kupfuura kugutsa ichi chinoshanda, zvisinei, ivo vanovawo akakosha kushingaira kuunza hunhu nemaitiro mumba. Uye ndezvekuti masitepisi emukati anotora vhoriyamu yakakura uye anogona kuve ma protagonists eimwe nzvimbo kana tichida.
Unoda staira ipi yeimba yako? Pasinei nemhinduro yako, hazvizonetsi kwauri kuwana mamwe masitepisi anokubatsira kuti uwedzere. Uye dziripo marudzi akawanda emasitepisi emukati uye zvakasiyana zvikuru maererano nekugadzirwa kwavo. Uye mune izvi tinomira nhasi, tichikuratidza zvirevo zvakasiyana zvemaitiro ega ega.
4 Zvemazuvano, zvemazuva ano
ari masitepisi emapuranga mumatoni epakati kana akasviba nesimbi dzakashandwa vakazvibata senzvimbo yepakati pedzimba kwemakumi emakore uye vacharamba vachidaro. Zvimiro zvavo zvakatenderedzwa zvicharamba zvichititakura makore apfuura, kunyangwe iye zvino ari kugadziridzwa nemavara akareruka uye akangwara njanji.
Asi masitepisi emapuranga haasi iwo ega anokwanisa kuunza iyo classic aesthetic kuimba yekutandarira. Iwo Fdombo rakashongedzwa kana marble nesimbi simbi Ivo zvakare vanozviita mune dema, ndiko kuti, vachipa yakawedzera sophistication. Uye ndezvekuti aya masitepisi emukati achiri anofarira kuve chinhu chepakati pemakoridho nemakamuri ekugara edzimba dzepamusoro uye dzimba dzeumbozha.
New York loft yakatora chimiro cheindasitiri kune imwe nhanho uye kubva ipapo vazhinji vakatsvaga kubatanidza zvinhu zvemaindasitiri mumba mavo. Metal masitepisi Iwo akanakisa mamwe maitiro eizvi, achishandura ese achembera simbi mashizha uye simbi gidhi kuita mubatsiri mukuru wedhizaini yako.
Iyo simbi grid Nhasi ndiyo inonyanya kufarirwa sosi mudzimba idzo dzinofunga kubheja pane maindasitiri dhizaini staircase. Uye kunyangwe ichiwanzo bheja pane nhema grid nekuda kweichi chinangwa, zviri kuramba zvichijairika kushinga nechena, bhuruu, yero kana pink. Pfungwa yakasimba yeiyi imwe nzira ndeyokuti inoratidzika chiedza uye inobvumira chiedza kupfuura kubva kune rumwe rutivi kuenda kune rumwe, kuva mubatsiri mukuru munzvimbo idzo apo chiedza chepanyama chinongobva kune rumwe rutivi.
Iko kongiri ndechimwe chinhu chine hukama zvakanyanya nemaitiro eindasitiri. Izvi zvinopa "kusimba" kukuru kune masitepisi, saka isu tinowanzo kuwana matanho mune ino chinyorwa akasanganiswa neyakajeka kwazvo simbi simbi. Aya marudzi emasitepisi anotarisa kunyanya kunaka munzvimbo dzerustic uye dzemazuva ano uko zvinhu zvemapuranga zvine basa rekupa kudziya.
Kana isu tichitsvaga minimalist maitiro masitepisi anoyangarara ivo nguva dzose sarudzo yekufungisisa. Matanda ematanho aya anowanzo kutsigirwa kune rimwe remativi awo, achipa inotaridzika inoyevedza yekunzwa kusarema iyo isingafanirwe kutyorwa nesarudzo isina kunaka yekutuka.
Haisi iyo yega nzira yekubatanidza minimalist uye avant-garde nzvimbo uye kana yakachengeteka kana tiine vana kana vanhu vane matambudziko ekufamba kumba. Pose patinobheja mitsetse yakachena uye mavara anobatanidza staircase muimba isu tichawana aesthetic inopindirana nemaitiro aya.
Zvemazuvano, zvemazuva ano
Mazhinji magadzirirwo atataura nezvayo kusvika parizvino anogona kukwana chiyero ichi zvakare. Uye ndezvekuti mune izvi mune nzvimbo yemasitepisi akasiyana zvakanyanya pane kumira kunze kwezvimiro zvavo, pfungwa kana ruvara. Masitepisi emukati anoshongedza zvazvino, zvemazuva ano uye avant-garde nzvimbo dzisingawanzo onekwa.
Masitepisi aya akafanana papi? Vazhinji vavo batanidza zvinhu zvakasiyana mukugadzirwa kwayo: huni nesimbi, huni negirazi, dombo nekongiri ... Kuve masitepisi anobatanidza mukati mezvakatipoteredza kana kuputsika nawo, akamira kunze kwezvimwe zvinhu uye kuva pakati pekucherechedza.
Masitepisi emukati anoita basa rakakosha mukushongedza kwemba. Ndivo chimwe chezvinhu zvekutanga zvinokwezva kutarisa uye kuva mubatsiri mukuru we kuwedzera hunhu uye maitiro yeimba yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Kushongedza maitiro » Indoor masitepisi: sarudza maitiro ako
Hazvina kufanana kuda munhu, pane kumuda
Zvitaera mudema nemuchena zvechando